Kuzovotwa isixegisiwe imithetho yeCovid-19 - Ilanga News
Home Izindaba Kuzovotwa isixegisiwe imithetho yeCovid-19
Kuzovotwa isixegisiwe imithetho yeCovid-19
uDkt Nkosazana Dlamini-Zuma
KULINDELEKE ukuba kushaye umhla ka-1 ku-Lwezi (Nove-mber), okuwusuku lokhetho lohulumeni basekhaya, isixegisiwe imigomo ebekelwe ukunqanda ukubhebhetheka kweCoronavirus, edala iCovid-19, emuva kokuba uNgqongqoshe woHulumeni baseKhaya, uDkt Nkosazana Dlamini-Zuma, ememezele lolu suku ngokusemthethweni izolo ngoLwesithathu.
Uthe ukumenyezelwa kwalolu suku kusho ukuthi amaqembu ezepolitiki asengayiqala imikhankaso yawo, kodwa elandela imigomo yokunqa-nda leli gciwane ngokwesigaba sesi-thathu.
Uveze ukuthi uMengameli Cyril Ramaphosa useqalile ukuxhumana nezinhlaka ezahlukene mayelana nokwehlisela leli lizwe esigabe-ni esingaphansi sokunqanda ukusabalala kwaleli gciwane.
Esigabeni sesithathu bawu-50 kuphela abantu abavumelekile ukuba semcimbini uma usendaweni evalekile kanti endaweni evulekile ku-mele kube yingxenye yesibalo esimumathwa yileyo ndawo. Kuzobe kuqala ukuthi usuku lokhetho lube ngoMsombuluko eNi-ngizimu Afrika kusukela kwaqala ukubusa uhulumeni wentando ye-ningi.
UDkt Dlamini-Zuma uveze ukuthi kuzoba kumengameli ukuthi lolu suku ulwenza lube yiholide, ukuze abantu bakwazi ukuyovota. Unxuse amaqembu ezepolitiki ukuba athi uma eqhuba imikha-nkaso yawo, alandele imigomo ebe-kiwe njengoba ezobe ekhankasa ngesikhathi saleli gciwane.
Uphinde waveza nokuthi nangosuku lokhetho kuzomele kuqikelelwe ukuthi imigomo ebekiwe kunoma yisiphi isigaba – esizobe sibekwe ngumengameli – iyalandelwa ukuqinisekisa ukuphepha kwabantu.
Kuzokhumbuleka ukuthi phambilini ungqongqoshe wayememezele usuku lwangomhla ka-27 kuMfumfu (October) kodwa i-IEC yafaka isicelo eNkantolo yoMthe-thosisekelo ukuba ukhetho luhlehliselwe unyaka ozayo.
Inkantolo yasichitha lesi sicelo se-IEC yabe isiphakamisa ukuthi lwenzeke ezinsukwini eziphakathi komhla ka-27 kuMfumfu nomhla ka-1 kuLwezi.
Iningi labantu, namaqembu ezepolitiki balinde inkulumo kaMengameli Ramaphosa ngokwehlisela leli lizwe esigabeni esingaphansi ukuze kuxege imigomo ebekiwe yokunqanda iCoronavirus.
Previous articleZisukumise umasikandi “izinqe zebhosi”
Next articleBasola uMseleku ‘ngokudukisa’ izwe